Zvitsuwa zveBahamas neHomesick Launch Limited-Edition Kenduru Kukurudzira Wanderlust Chando Ino |
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Bhahamasi » Zvitsuwa zveBahamas neHomesick Launch Limited-Edition Kenduru Kukurudzira Wanderlust Nguva Yechando ino.
Kudyidzana Kunounza Island Vibes Yakananga kudzimba dzevanhu; Uyezve Mumwe Lucky Winner Achahwina Yekupedzisira Kutizira kuBahamas
Kekutanga zvachose, vafambi vanogona kutakurwa ipapo kuenda kuBahamas kubva kune chero nzvimbo yekugara kana kumba-hofisi. Bahamas neHomesick vakabatana kuti vaburitse kenduru ye “The Bahamas” kenduru yakafemerwa nekudziya kwenzvimbo inodziya, tsika yakasarudzika uye mahombekombe ejecha jena. Kupemberera uye kukurudzira vatengi kuti varonge kana kutsvagisa chiitiko chavo chinotevera, vaviri ava vari kuita kuti zvive nyore kuunza hwema kuhupenyu nekupa mumwe ane rombo rakanaka kuhwina kupukunyuka kwekupedzisira kuenda kunzvimbo.
Kudyidzana uku musanganiswa usina musono wekuzorora Iyo Bahamas inopa kune vafambi vanoshuvira kunonoka uye chinangwa cheHomesick chekushandisa simba rekunhuhwirira kubatanidza vanhu kunzvimbo uye nguva dzinonyanya kukosha. Kenduru richangoparurwa rinopa ruremekedzo kunyika nekunhuhwirira kutsva kwemunzvimbo inopisa ine zvinyorwa zvezvinotevera:
Pineapple mahafu inoyeuchidza nezveminda yepineapple yaEleuthera
Kokonati mukaka yakafuridzirwa nemichindwe yekokonati inowanikwa munyika yose yeOut Islands
Uye hwema hwemunyu hwe mhepo yegungwa izvo zvinokwevera vanhu kubva kutenderera pasirese kuti vawane ruzivo turquoise hued mvura uye jecha repink
"Wanderlusters vachifunga nezverwendo rwavo runotevera kuBahamas vachanakidzwa nekenduru nyowani," akadaro Latia Duncombe, Acting Director General weBahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation. "Vatinoshanda navo kuHomesick vakakwenenzvera hwema hunoyeuchidza nyika yedu yechitsuwa. Kukwirira kwemwaka wechando kwakanzwika senguva yakakwana yekuyeuchidza vafambi kuti takamirira kusvika kwavo pese pavanonzwa vakagadzirira kuita kudaro. "
NeMutengo Wekutengesera Wakakurudzirwa neMugadziri (MSRP) wemadhora makumi matatu nemana, "The Bahamas" kenduru yeHomesick yakaputirwa mune inodzikamisa pastel print inoratidza nzvimbo yechitsuwa. Kenduru imwe neimwe yakadururwa nemaoko inopa nguva yakawanda yekupisa ye34-60 maawa, uye iyo yakasarudzika kugona kudhinda meseji kubva pamoyo kuenda kugaba rekenduru inoita chipo chinonyanya kukosha (+$80). Vatengi vanogona kunanga kuhomesick.com/bahamas kunozvirapa kana kugovera chipo chenguva yechitsuwa neshamwari inoda kutiza.
"Mumakore maviri apfuura sezvo vafambi vaifanira kumbomisa nzendo dzavo uye zororo, takaona kuwedzera kwevatengi vachishandisa zvinonhuhwirira zvedu kuti vanzwe vakabatana nedzimwe nzvimbo dzavanofarira pasirese," akadaro Lauren Lamagna, General Manager kuHomesick. . "Ndeipi nzira iri nani yekuunza chiitiko icho nharaunda yedu yanga ichishuvira kupfuura kubatana neThe Bahamas kumutsa zvitsuwa zvavo zvine hunyanzvi nemahombekombe ane jecha mukunhuhwirira?"
Iwo macanduru edition "The Bahamas" makenduru aripo kuti atengeswe kutanga 25 Ndira 2022 apo zvigadzirwa zvichiripo.
WAKANGA KURONGA KURONGWA IKO?
Nguva yechando ndiyo chikonzero chakakwana chevafambi vanoshuvira Bahama Mama cocktail, yakapfuma yetsika zviitiko uye jecha pakati pezvigunwe zvavo - kuti zviite chokwadi. Mumwe ane rombo rakanaka anokunda uye muenzi achapihwa kanduru kenduru yeHomesick "The Bahamas", ndege uye kugara kwemazuva mana, kwehusiku hutatu. Caerula Mar Club, nzvimbo yakasarudzika yeboutique pachitsuwa chisina kuparadzwa cheSouth Andros. Iyo yekutandarira yakapararira kune gumi yakavanzika oceanfront acres uye inoratidzira nzvimbo dzekunze dzinofefetera, dining yeCaribbean yakanaka, uye imwe yemahombekombe asina kumbobatwa muBahamas. Caerula Mar Club yakanzi imwe ye "Best New Hotels in the World" na Condé Nast Mufambi muna 2020 uye yakazivikanwa pa Kufamba + Kwekuzorora 2021 It List yeMahotera Matsva Akanakisisa Munyika. Kuti udzidze zvakawanda nezve giveaway, shanya kubatana uku kuti uwane mukana wekuhwina!
KUBURUKA MAHARA KUENDA KUZVITSWA
Ino ndiyo nguva yekuronga zororo kuBahamas sezvo nzvimbo yacho iine zvipo zvinoenderana nemabhajeti emufambi wega wega uye zvaunofarira nezvitsuwa zvinopfuura gumi nematanhatu zvine hunhu hwakasiyana hwevashanyi kusarudza kubva.
Vatengi vezororo-vanorwara vanoda kuona zvitsuwa ivo pachavo vanogona kubhururuka vakasununguka kubva kuNassau kuenda kuZvitsuwa zveOut nezvipo zvenguva shoma. Inoshanda sei? Kuburikidza na14 Kukadzi 2022, vanotsvaga mafaro uye R&R aficionados vanogona kubhuka pekugara pakutora chikamu. Bahama Out Islands Promotion Board nhengo dzehotera (4-husiku hushoma) uye gamuchira imwe yemahara ndege kana Bahamas Ferry tikiti kubva kuNassau. Vaya vanobhuka kugara kwehusiku hunomwe kana kudarika vanogona zvibodzwa maviri akasununguka ndege kana Bahamas Ferry matikiti kubva kuguta guru renyika.
Kuti uwane mamwe matipi ekuronga zororo reBahamas kana kudzidza zvakawanda nezve kwekuenda, shanyira Bahamas.com.
Iine zvitsuwa zvinopfuura mazana manomwe uye cays uye 700 yakasarudzika chitsuwa nzvimbo, Iyo Bahamas iri makiromita makumi mashanu chete kubva kumahombekombe eFlorida, ichipa nyore kubhururuka kure kutiza iyo inotakura vafambi kubva kune avo ezuva nezuva. Zvitsuwa zveBahamas zvine hove dzepasi rose, kudhizaivha, kukwasva chikepe uye zviuru zvemamaira emvura anoyevedza epasi uye mahombekombe akamirira mhuri, vakaroora uye vanofarira. Ongorora zvese zviwi zvaunofanira kupa pa bahamama.com kana uri Facebook, YouTube or Instagram kuti uone nei Zviri Nani muBahamas.
Yakavambwa muna 2016, Homesick imhando yekunhuhwirira kwepamba uye mararamiro ayo anogadzira echokwadi, akadururwa nemaoko zvigadzirwa zvinokwevera pasimba rekunhuhwirira kumutsa ndangariro dzinokosha dzevanhu, nzvimbo, uye nguva. Kunhuhwirira kwega kwega kunotsvagirwa zvakanyanya uye kugadziridzwa nechikwata chedu chevatauri venyaya, mapefiyumu chemist uye machandler mukubatana nenharaunda dzinodisa. Yakagadzirwa kubva kune yakasikwa soy wax musanganiswa ne premium donje wicks uye tsika inonhuhwirira mafuta, makenduru edu haana chepfu uye haana lead, mapurasitiki, paraben, petroleum kana phthalates. Kuti udzidze zvakawanda, tapota shanya kumusic.com.
Kusuwa kumba chikamu che Win Brands Group (Win), muridzi anotungamira wechigadzirwa-chakatarisana, mabhureki evatengi anopa mufaro uye zvinoshamisa zviitiko kune vatengi vavo. Pamusoro peHomesick, Win yazvino portfolio inosanganisira zvinofarirwa zve QALO (silicone wedding rings and accessories) uye giravhiti (gumbeze rakaremerwa rekutanga).
Caribbean Verenga Nast Condé Nast Mufambi The Bahamas
Kukosheswa zvakanyanya, kutsanangurwa kwakanyatso kutsanangurwa uye kukuru mune zvakadzama. Ndinokutendai nekuedza kukuru kwakadaro. Ndakawana pfungwa yakajeka pamusoro penyaya iyi. Ndakanakidzwa chaizvo nekuverenga kwayo positi iyi zvakakwana kuti nditsvage kunyora ichi chakanakisa chinyorwa uye inobatsira positi ndatenda nekugovana.